Sida Loo Sameeyo Lacag Dheeraad ah oo Uber Lagu Wado Sabtiyada iyo Axadaha
Bogga ugu weyn Sida Loo Sameeyo Lacag Dheeraad ah oo Uber Lagu Wado Sabtiyada iyo Axadaha
Haddii aad rabto inaad kasbato lacag dheeri ah gaar ahaan maalmaha fasaxa, wadista Uber waa ikhtiyaar aad u wanaagsan. Adigu…
Haddii aad rabto in aad kasbato lacag dheeraad ah gaar ahaan maalmaha fasaxa ah, wadista Uber waa ikhtiyaar aad u wanaagsan. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad ogaato Sida loo sameeyo Uber Lacag Dheeraad ah usbuucyada
Waa maxay sababta aan u oggolaan lahaa in dhammaan dadka aan garanayn ay soo raacaan gaadhigayga oo aan ku dhex wareejiyo magaalada anigoo wata gaadhigayga? Waan ogahay, sidaas oo kale ayaan u maleeyay. uber ma u qalantaa?
Dabcan, waxaan sameeyay faras badan (oo waxaan la hadlay dad sakhraansan intii aan runtii doonayay), laakiin waxay ahayd riwaayad wanaagsan dhammaadka wiigga. Waxay ahayd mid aad u mudan.
Miyay adag tahay in lacag lagu kaxeeyo Uber
Lacag ku sameysasho Uber ma adka sida ay dad badan moodayeen. Markaa haddii aad xiisaynayso sida lacag looga sameeyo Uber, Fiiri qoraalka hoose, oo is baro saddexda talo ee ku saabsan sida lacag looga sameeyo Uber oo aad sare ugu qaaddo dakhligaaga, si aad lacag badan u samayso:
Haddii aad ku jirtay xayndaabka Uber, waxaan dhihi lahaa waxay mudan tahay in la isku dayo ugu yaraan.
Dhab ahaantii maaha qof kasta, laakiin waayo-aragnimadayda, waa ikhtiyaar macquul ah haddii aad haysato lacag oo aad u baahan tahay lacag yar oo dheeraad ah. Markii hore waan ka shakiyay oo mar la i weydiiyay, miyay u qalantaa baabuur wadista Uber? laakiin waxaan u maleeyay inaanan waxba ka lumin markaan is-diiwaangeliyay oo aan isku dayay.
Iyo marka la eego wax -qabadka labaad, Uber waa shaki la'aan mid ka mid ah riwaayadaha ugu mushaarka badan (marka la eego qaraabada).
Dabacsanaanta ay bixiso dhaqanka Uber ayaa laga yaabaa inay xitaa ka xiiso badan tahay mushaharka. Darawal ahaan, ma lihid jadwal go'an. Markaad haysato wakhti firaaqo oo aad rabto inaad safarto oo aad lacag samayso, ku shid barnaamijka taleefankaaga oo sug codsiyada wadista.
Maqaalkaan, waxaan ku dhihi doonaa sida saxda ah ee aan lacag badan uga kasbaday Uber iyo maxay yihiin faa'iidooyinka kale ee darawalnimada oo dadka badankiisu aysan tixgelin.
Waxaan si toos ah u aadi doonaa xirmooyinka naxaasta ah: dakhligayga intii aan safarka ku jiray aad buu u fiicnaa. Runtii maan filayn inaan lacag badan sameeyo intaan sameeyay.
Taasi waxay tiri, waa inaad caqli ku leedahay sida loo sameeyo, haddii kale, waxaad lumin kartaa waqti badan (iyo gaas) aakhirka.
Darawaliinta waxaa la siiyaa safar kasta oo ay bixiyaan, waxayna ku xiran tahay waddada iyo baahida hadda jirta. Waqtiyada walaaca daran, darawalada waa inay bixiyaan qiime sare si ay u kaxeeyaan Uber.
Isku qor halkan Uber
Si aad sida ugu badan uga faa'ideysato maalmahaaga fasaxa ah oo aad uga hesho xoogaa lacag caddaan ah oo dheeri ah adigoo isticmaalaya Uber, waxaad u baahan tahay inaad qaadato tilmaantan ku saabsan Sida Loo Sameeyo Lacag Dheeraad ah Ku Wadida Uber Maalmaha Todobaadka si dhab ah, maadaama ay hubaan tibaaxo kaa caawin kara inaad lacag sameyso .
Waa inaad baabuur wadataa inta lagu jiro saacadaha degdegga ah si aad u kordhiso dakhligaaga.
Samee dadaal wadajir ah si aad macaamiishaada u siiso waayo -aragnimo weyn
U isticmaal waqtigaaga Riders si aad uga faa'iidaysato.
Waa hab lagu helo shaqo adduunka oo dhan
Lacag baad ku kasban kartaa habkaaga
Adiga ayaa maamuli doona lacagtaada
Hel tilmaamaha abka
Waad kiraysan kartaa ama kirayn kartaa baabuur
#1. Waa inaad baabuur wadataa inta lagu jiro saacadaha degdegga ah si aad u kordhiso dakhligaaga
Waxaan ku noolahay magaalo jaamacadeed. Markii hawsha diiwaangelinta darawalnimada la dhammaystiray oo hawlgalinta la dhammaystiray, ayaan galab galab u galay Starbucks -ka xaafaddayda waxaanan sugayay dhaq -dhaqaaqyo ii muuqda.
Kaliya laba saacadood ka dib, waan ogaa inaanan si sax ah u samaynayn. Waxaan curyaamiyey appka dhowr saacadood oo waxaan ka shaqeeyey waxyaabo kale oo loogu talagalay degelkeyga. Waxaan go'aansaday inaan sugo ilaa habeen dambe si aan mar kale isku dayo.
Erayada furaha ah ee habeenka Jimcaha ee ugu horreeya dhammaantood waa ardaydii xagaagii laga soo celiyey magaalada.
Qiiqyada Quduuska ah, taasi waxay beddeshay heshiiskii. Qof walba wuxuu ku raaxeysanayay banaanka magaalada, taas oo micnaheedu ahaa socod joogto ah laga bilaabo 8:00 fiidnimo ilaa abbaare 2:30 am markii ugu dambayntii aan go'aansaday inaan ugu yeero joojinta.
#2. Samee dadaal xooggan si aad Macaamiishaada u siiso waayo -aragnimo weyn
Waxaan ogaaday in wadida Uber ay la mid tahay muuqaal kasta oo adeeg ku salaysan. Haddii aad siiso darawalka khibrad weyn oo aad la xiriirto isaga shakhsi ahaan, waxaa laguula dhaqmi doonaa si wanaagsan. Markii aan ku dhibtooday inaan ka qosliyo raacitaanka, tirada talooyinka aan helay ayaa si aad ah u kordhay.
Waxyaabaha qaarkood waxaan kugula talinayaa waayo -aragnimo waditaan oo wanaagsan:
Hayso gudaha aan nadiif ahayn oo u soo ura sida nadiifta ah.
Gaar ahaan goor dambe oo habeennimo ah, waxaan had iyo jeer bixin jiray fiilada AUX. Mar walba waxay guul weyn u ahayd martidii xafladda.
Baro orodkaaga! Hadal yar.
Hayso biyo iyo/ama cunto fudud.
Soo qaado boorso matag (nasiib wanaag uma baahni, laakiin sidoo kale waan ka xumahay)
Si taxaddar leh u wad oo xushmee xadka xawaaraha.
#3. U isticmaal wakhtigaaga Riders si aad uga faa'iidaysato
Ku dhawaad ​​dhammaan wadayaasha ayaa jecel inay weydiiyaan, “Haddaba maxaad sameyneysaa haddii aadan fuulin Uber? Ma aqaan sababta ay dadku u jecel yihiin inay wax weydiiyaan, laakiin had iyo jeer way sameeyaan.
In kasta oo aanan ka fikirin inaan sidan sameeyo markaan baabuurka wado habeenkii, haddana aad bay waxtar u leedahay inaad la xiriirto darawaladaada maalintii. Ganacsade ahaan, waxaan jeclahay fikradda ah inaan la kulmo dadka bulshada dhexdeeda ah oo aan la wadaago macluumaadka ku saabsan shirkadayda iyo waxqabadyadayda.
Marna ma garanaysid qofka aad la kulmi doonto iyo sida aad u caawin karto ama sida ay kuu caawin karaan. Fursadaha oo dhan fur! U isticmaal barxadda wadista ee dhow si aad uga faa'iidaysato.
#4. Waa hab lagu helo shaqo adduunka oo dhan
Rideeyeyaashu waxay Uber ka codsan karaan boqolaal magaalo oo adduunka ah - in ka badan barnaamij kasta oo wadista wadista. In ka badan 75% dadka Mareykanka ayaa ku nool halka Uber ka shaqeyso. Iyada oo ay jiraan meelo badan oo aad baabuur ku waddo, awoodda aad u leedahay inaad lacag ku kasbato giraangiraha khasab ma aha inay saameyn ku yeelato u guurista meel cusub.
#5. Waxaad lacag ku kasban kartaa habkaaga
Had iyo jeer uma baahnid inaad siiso gaadiid si aad lacag ugu hesho Uber. Darawalada da'doodu ka yar tahay 19 waxay ku bixin karaan cunto iyo baakado UberEATS iyo UberRUSH. Dhab ahaantii, xitaa uma baahnid baabuur si aad u keento magaalooyin badan. Baaskiilka ama mootada ayaa si fiican u shaqayn doonta.
#6. Adigu waxaad maamuli kartaa lacagtaada
Safar kasta oo aad dhammayso ka dib, qiimaha aad samayso ayaa lagu darayaa wadarta dakhligaaga maalinlaha iyo toddobaadlaha ah. Tilmaamahan, oo aan laga helin dhammaan apps fuulitaanka, waxay kuu sahlaysaa inaad la socoto hadafyadaada maaliyadeed.
#7. Hel tilmaamaha gudaha-app
Iyada oo la adeegsanayo app-ka-dhex-dhexaadinta, helitaanka goob kasta oo fuushan iyo meesha loo socdo waa sahlan tahay. Si kalsooni leh u maraan adiga oo adeegsanaya tilmaamaha marba dhinac u jeedinaya ee ku jira barnaamijka.
Haddii aad leedahay koonto TikTok ah, waxaad ka kasban kartaa xoogaa lacag caddaan ah. Guji xiriirinta si aad u gasho faylka 5 Siyaabood oo Fudud oo Lacag looga Sameeyo TikTok
#8. Waad kiraysan kartaa ama kirayn kartaa baabuur
Haddii aadan haysan baabuur, Uber ayaa kaa caawin karta inaad mid hesho. Waa baabuurkaaga si aad u isticmaasho sidaad jeceshahay lacag -bixintana si toos ah ayaa looga gooyaa dakhligaaga.
Faa'iido darrooyinka ku kaxaynta Uber
In kasta oo aan runtii u malaynayo in faa'iidooyinka ka-noqoshada wadaha Uber ay mudan yihiin, riwaayaddani kuma koobna qorraxda iyo qaanso-roobaadka.
Uber kuma siiso gaaska ama khidmadaha
Inta u dhaxaysa safarada lagu kala gooyo kala bar si aad u soo qaadatid, waxaad isku aragtaa naftaada si degdeg ah oo ku filan oo gaas lagu buuxiyo. Waxa kale oo loola jeedaa inaadan u baahnayn inaad kaxayso inta u dhaxaysa safarada maxaa yeelay gaasku si dhakhso ah ayuu u cunaa (lacagna ma kasbato inta u dhaxaysa safarada).
Gasho oo jeex baabuurkaaga
Haddii aad sii waddo soo -gelinta iyo soo -saaridda baabuurkaaga, baabuurkaagu waxoogaa wuu dhaawacmi doonaa. Aniga sidaa iima xumayn, laakiin waan arki karaa sida xirashadu isu kordhin karto.
Ma aha ikhtiyaar fog oo weyn
Dhamaadka, ma jirto fursad koritaan oo dhab ah haddii aad tahay lammaane duuliye Uber ah. Haddii aad siiso rakaabka fursad wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad mudnaanta siiso fursadaha iyo xirfadaha dhabta ah si aad u dhisto resume. Ha ku indho tirin alaabta. Ka fikir wakhti dheer.
Marar badan ayaan soo laaban jiray ka dib safarkeygii ugu horreeyay ee Uber. Hadda, waxaan marmar baabuur kaxeeyaa habeenka Sabtida maxaa yeelay waxaan doorbidayaa inaan diiradda saaro horumarinta ganacsigayga.
Ugu dambayntii, waxaan u malaynayaa Uber inay tahay ikhtiyaar weyn, marba haddii aad u aqoonsato waxa ay tahay. Isku day mar.
15 Fikradaha Dakhliga Dakhliga Ugu Fiican ee Lacag La Helo Markaad Hurdo
Lacag Degdeg ah: Lacag Bixiya si aad u Daawato Fiidyowyada Qadka (TOP 15)
23 Fikradaha Ganacsiga Yaryar ee Ragga leh Faa'iidada Badan
Waxaan rajeyneynaa in qoraalkaan uu ku siiyo macluumaadka lagama maarmaanka ah. Fadlan la wadaag asxaabtaada oo ku dhaaf su'aashaada ama jawaabtaada sanduuqa faallooyinka si aan si fiican kuugu adeegno.
Fiiri Faallooyinka (2)
Sida Loo Calaamadeeyo Magaca Shirkad Degdeg u ah 2022
Noqo marti -geliyaha Airbnb oo samee Lacag badan | TILMAAMAHA UGU FIICAN
Noqoshada martida Airbnb runtii waa khibrad fudud oo faa'ido badan leh. Waxay kaliya u baahan tahay inaad kiraysato gurigaaga.…
Miyaad rabtaa inaad Kanada ku taajirto? Qaado dhaqdhaqaaq dhinac ah si aad u dhammaystirto shaqadaada maalinlaha ah.…